Dowladda ITOOBIYA oo war kasoo saartay xaaladda Ra’iisul Wasaare Abiy Ahmed. |
Dowladda ITOOBIYA oo war kasoo saartay xaaladda Ra’iisul Wasaare Abiy Ahmed.
Addisabab(GNN):-Dowladda Itoobiya ayaa markii u horeysay ka hadashay warar maalmihii u dambeeyay qabsaday baraha bulshada, kuwaasi oo ku aadana xaaladda caafimaad ee ra’iisal wasaaraha dalkaas, Abiy Axmed, kadib muddo laga waayay warbaahinta.
Xafiiska ra’iisal wasaaraha ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay inaysan waxba ka jirin wararkaas, oo ay ku tilmaameen been abuur aan sal iyo raad laheyn.
Wararka la isla dhex marayay ee xaalada caafimaad ee Abiy ayaa waxay sheegayaan in arrin caafimaad loogu qaaday dalka dibadiisa, kadib toogasho lala beegsaday, taasi oo uu beeniyay xafiiska ra’iisal wasaaraha Itoobiya.
Abiy ayaa markasta dhaq-dhaqaaqiisa laga dareemi jiray baraha bulshada oo uu taageerayaashiisa iyo bulshada dalkaas kula wadaagi jiray hadba marxaladaha cusub, midaasi oo aan dhicin maalmihii lasoo dhaafay.